720 P – Quality – Yourcinema
Legacy of Lies Legacy Of Lies (2020) မာတင် ဆိုတဲ့ စီအိုင်အေက လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်က mission တစ်ခုထမ်းဆောင်ရင်း သူ့ဇနီးဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မာတင်ဟာ လျှို့ဝှက်အေးဂျင့် အဖြစ်မှနုတ်ထွက်ပြီး boxing လောကမှာ ဘူလီဘွိုင်းဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းကာ သူ့သမီးလေးနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်နေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဆာရှာဆိုတဲ့သတင်းထောက်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ရုရှားရဲ့အတွင်းရေးတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အကူအညီတောင်းလာတဲ့အခါ... သူကကူညီမှာလား? သူ့ဇနီးကရော ဘာကြောင့်သေခဲ့တာလဲ? သတင်းထောက်မလေးနဲ့ကော ဘယ်လိုပတ်သတ်မှုတွေရှိမလဲ? ဒီကိစ္စရဲ့ နောက်ကွယ်မှာရော ဘယ်သူက လက်ဝါးကြီးအုပ်နေတာလဲ? သတင်းထောက်တွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ် ရေးသားခွင့်ရရှိပါ့မလား? စတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာအပြင် အဖေနဲ့သမီးကြားက မေတ္တာကိုပါ မြင်ရမယ့် action-drama ‌ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Adrian Bol ရိုက်ကူးထားပြီး Wolf warrior, IP man 4, Doctor strange စတဲ့ ထိပ်ထိပ်ကြဲ ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့ မင်းသား ...
IMDB: 4.9/10 444 votes
Groundhog Day Groundhog Day (1993) မင်းသားကြီး Bill Murray သရုပ်ဆောင်ထားပြိး Imbd မှာ 8 , Rotten Tomatoes မှာ 96 တောင်ဆိုတော့ Rating က အတော်ကြီးကောင်းနေပြီ... ဒါ့အပြင် အတော်ရယ်ရ ပြီး အချစ် ဂန္တဝင်ကားကောင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်တာမို့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြန်လည် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်... သူဟာ သာမန်သတင်းဋ္ဌာန တစ်ခုမှာ ရာသီဥတုကြေငြာသူ ဖြစ်ပြီး ပိုနာမည်ကြီးတဲ့ သတင်းဋ္ဌာနမှာ သတင်းကြေငြာတဲ့ ကြယ်ပွင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သူ့ကိုယ်သူ ယူဆထားသူ.. ဒါ့အပြင် လုပ်ဖော်လုပ်ဖက်တွေကိုလည်း ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံတတ်တဲ့ ဂေါက်သီးအဖြစ်တွေ့ရမှာပါ... တစ်နေ့ USA က ပွဲတော်တွေထဲက "ရှဥ့်ပွဲတော်" ဆိုတဲ့ သူသတင်းမပြောချင်တဲ့ ပွဲတော်လေးကို ပရိုဂျူဆာလုပ်ပေးတဲ့ စကီလေးရယ် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဒရိုင်ဗာရယ်နဲ့ သွားရောက်တင်ဆက် သတင်းယူပေးဖို့ အထက်အမိန့်ကျလို့ သွားပြောရင်း ဘာတွေ ဘယ်လိုတွေ အလွဲတွေ မဖြစ်နိုင်တာတွေကြုံပြီး သူ့ဘဝ ဘယ်လို ...
IMDB: 8/10 567,505 votes
Kirik Party Kirik party အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဇာတ်ကားများကို ကြည့်ဖူးတဲ့ပရိသတ်များအတွက်တော့ မင်းသမီးချောလေး ရက်ရှ်မီကာ မက်ဒါးနား ကို ကျိန်းသေသိကြမှာပါ... စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင် မင်းသမီးချောလေးရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ အင်မတန် ရေပန်းစားကျော်ကြားပါတယ်... ဒီကားထဲမှာတော့ အသည်းကျော်လေးဟာ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းရဲ့ စတုတ္ထနှစ် နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူနေရာကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်... မင်းသားကတော့ အဲဒီကျောင်းရဲ့ မထမနှစ်ကျောင်းသားတယောက်ပါ... မမဖိုင်နယ်သူနဲ့ ပထမနှစ်ကျောင်းသားလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ဇာတ်လမ်းအလှည့်ပြောင်းများနဲ့ သရုပ်‌ ဖော်ထားတာကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသည်းကျော်လေးအပြင် နောက်ထပ်မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ပါပါသေးတယ်... မင်းသားကိုလည်းပထမဆုံး ဂျလေပီစတိုင် ဆံပင်ဂုတ်ထောက်နဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ စမတ်ကျကျခံ့ချောကြီးအဖြစ် တွေ့မြင်ရမှာပါ... ကျောင်းသားကားတွေရဲ့သဘာဝ ကျောင်းအ ငွေ့အသက်များ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကွက်ကျော်ရိုက်တာတွေ တစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်း ကျောင်းသားအချင်းချင်းမသင့်မြတ်တာတွေ ဂိုဏ်းစတားဆန်ဆန်ဖြေရှင်းတာတွေ အထိုးအကြိတ်အခန်းများကလည်း ပရိတ်သတ်များကိုကျေနပ်စေမှာပါ... ဇာတ်လမ်းအရသာပျက်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် အစအဆုံး ကြည့်ရှု့ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်... ဘာသာပြန် = Maung Pyae Aye Encoder = လူယုတ်မာ ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ 720P [710 MB]
IMDB: 8.4/10 4,207 votes
Paranormal Activity 1 ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ်ကောင်ထဲနဲ့ ရိုက်သွားတာပါ မီကယ်နဲ့ ကေတီ ပေါ့ ပထမပိုင်းမှာတော့ မီကယ်က ကင်မရာဝယ်လာပြီးအိမ်မှာ အပျော်တမ်းရိုက်ကြတာပေါ့ ကေတီက ငယ်ငယ်ကတည်းကစိတ်ဒဏ်ရာရှိတဲ့ကောင်မလေး ညအိမ်ထဲခါ အသံတွေကြားလို့ ကောင်းကောင်းမအိမ်ရဘူး စိတ်ပညာရှင်တွေခေါ်ပြီး အဖြေရှာခဲ့ကြတယ် နောက်ဆုံး မီကယ်က သူရဲ့ ကိုယ်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲ.... တကယ်ကို ရင်တထိန့်ထိန့်နဲ့ ကြည့်ရတဲ့ကားပါ အိမ်ထပ်ခိုးမှာ တွေရတဲ့ မီးလောင်ထားတဲ့ ကောင်းမလေးပုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ ကေတီတစ်ယောက် တွက် ပိုပြီးခြောက်ခြားစရာကောင်းခဲ့တယ်... မီကယ်ရဲ့ သရဲ့ကိုနည်းလမ်းမျိုးစုံဘယ်လိုဖမ်းမလဲ စိတ္တဇဆန်ဆန် သရဲကားကြိုက်တဲ့လူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့်ကားမျိုးပါ စိတ်ပညာရှင်ဒေါက်တာဖားရစ်ရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ပယောဂဆရာကိုခေါ်ခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး နောက်ပိုင်း သူတို့လင်းမယားနှစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီး ထိန့်လန့်တဲ့ညတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အစပိုင်းကနေပြီးတော့ အဆုံးထိ ကြည့်တဲ့လူကို ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရအောင်ဆွဲခေါ်သွားတာပါ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဘာများဖြစ်သွားကြမလဲ ..... အိမ်မှာ တကယ်ပဲသရဲ့ရှိတာလား စိတ္တဇများဖြစ်နေတာလာ.... Translated & Review By -- Win Htun Naing Encoded By -- Kar Yan www.yourcinema.org App - https://www.facebook.com/yourcinema.movieapp/ Paranormal Activity 1 Paranormal Activity2Paranormal Activity ...
IMDB: 6.3/10 214,494 votes
Baaghi32020 တိုက်ဂါးရှော့ မင်းသားနဲ့ ဟာသမင်းသားလို့ပဲပြောရမလား Riteish Deshmukh မင်းသားနှစ်ယောက် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Aashiqyiထဲက မင်းသမီးလေးရယ် Ankita Lokhande တို့လည်းပါဝင်ထားတဲ့ Baaghi 3ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်.. ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ဗစ်ကရမ်နဲ့ ရော်နီမှာ အစ်ကိုဖြစ်သူကအရမ်း သိမ်မွေ့ပြီးတော့ညီဖြစ်သူက အမြဲတမ်း ကာကွယ်ပေးနေရတဲ့အခါ.... အစ်ကိုဖြစ်သူနာမည်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ညီဖြစ်သူ ရော်နီကအမြဲတမ်းရောက်လာပြီး ကာကွယ်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်... ဗစ်ကရမ်တစ်ယောက် ရဲအရာရှိအဖြစ် ဝင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း နောက်ကွယ်ကနေ ကူညီပေးနေတဲ့ ညီဖြစ်သူ ရော်နီ..... ဗစ်ကရမ်တစ်ယောက် လူကုန်ကူးဂိုဏ်း တစ်ဂိုဏ်းနဲ့ပတ်သက်မိပြီး ရော်နီကလည်း ကူညီဖြေရှင်းပေးနေချိန်..... နောက်ပိုင်းမှာဗစ်ကရမ်တစ်ယောက်ရာထူးတိုးဖြင့် အဲဒီဂိုဏ်းအကြောင်းကို အတွင်းအနက်ပိုင်းအထိ စုံစမ်းရတော့.... နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုမျိုးလျို့ဝှက်ချက်တွေကိုတွေ့မလဲ... ရော်နီတစ်ယောက်သူ့ရဲ့အစ်ကို ဗစ်ကရမ်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်သွားမလဲ... ဘယ်လိုမျိုး အခက်အခဲတွေကိုကြုံမလဲဆိုတာကို... ကျွန်တော်တို့ yourcinema မင်မင်နှစ်ယောက် ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပြီး ပရိသတ်တို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်... ကဲ... အားလုံးပဲ .... "Get Ready To Fight” ဘာသာပြန် = Kar Yan & YeThway Encodeer = Kyaw Thet
IMDB: 1.9/10 4,813 votes
Kavacham Unicode Version ဗီဇက်က ရဲအရာရှိ ဗီဂျေးဟာ မတရားစွပ်စွဲခံရပြီး လှည့်ကွက်တွေကြားမှာ ချောင်ပိတ်မိနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့အပြစ်ကင်းမှုကို သက်သေပြဖို့အတွက် သူ့မှာ အချိန် ၂၄ နာရီပဲရှိပါတော့တယ်။ တစ်ချိန်ကလေးစားခံရတဲ့ဘဝကို ပြန်ရဖို့အတွက် ၂၄ နာရီဆိုတဲ့အချိန်က သူ့အတွက်လုံလောက်ပါ့မလား။ သူ့ကိုယုတ်မာစွာ လှည့်စားထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့ကြပြီး သူ့မိခင်ကိုပါရန်ပြုလာတဲ့ လူတစ်စုကို ဘယ်လိုအကွက်ကျကျပြန်လည်လက်စားချေမလဲ၊ သူ့သိက္ခာသူ ဘယ်လိုပြန်ဆယ်မလဲဆိုတာကို အလန်းစားအကြမ်းစား အက်ရှင်များနဲ့ ကြည့်ရမြင်ရ ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါကြောင်း ညွှန်းလိုက်ပါရစေဗျာ...။ Review by MovieFighter. Enconded by KyawThet. Zawgyi Version ဗီဇက္က ရဲအရာရွိ ဗီေဂ်းဟာ မတရားစြပ္စြဲခံရၿပီး လွည့္ကြက္ေတြၾကားမွာ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အျပစ္ကင္းမႈကို သက္ေသျပဖို႔အတြက္ သူ႔မွာ အခ်ိန္ ၂၄ နာရီပဲရွိပါေတာ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္ကေလးစားခံရတဲ့ဘဝကို ျပန္ရဖို႔အတြက္ ၂၄ နာရီဆိုတဲ့အခ်ိန္က သူ႔အတြက္လုံေလာက္ပါ့မလား။ သူ႔ကိုယုတ္မာစြာ လွည့္စားေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခဲ့ၾကၿပီး သူ႔မိခင္ကိုပါရန္ျပဳလာတဲ့ လူတစ္စုကို ဘယ္လိုအကြက္က်က်ျပန္လည္လက္စားေခ်မလဲ၊ သူ႔သိကၡာသူ ဘယ္လိုျပန္ဆယ္မလဲဆိုတာကို အလန္းစားအၾကမ္းစား အက္ရွင္မ်ားနဲ႔ ၾကည့္ရျမင္ရ ခံစားရမွာပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း ၫႊန္းလိုက္ပါရေစဗ်ာ...။ Review by MovieFighter. Enconded by KyawThet.
IMDB: 5.6/10 310 votes
Underwater (2020) covid 19 ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေရသူတွေကို ဒီည ကြည့်ဖို့ ညွှန်းချင်တာကတော့ Underwater (2020) ပါပဲ.... အတော်များများကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးလို့ ပြောကြပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ ကြည့်ရတာတန်တယ် ထင်တာပါပဲ Kristen Stewart ကတော့ ချာလီ နဲ့ အိမ်ဂျလ် များ ထဲက ဆံပင် စတိုင်လ် အတိုင်းပဲ ဂတုံးကေ နည်းနည်းဖြစ်သွားတာပဲ ဒီကောင်မလေး ဒီလို ဂတုံးကေ နဲ့လဲ ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတုန်းပဲ သူများတွေလို ကိတ်ထွက် မနေပဲ ပြားတားတားလေးဖြစ်နေတာကလဲ သူ့ဆွဲဆောင်မှုပဲ.... ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ရေအောက်လေ့လာရေး အဆောက်အဦးကြီး တစ်ခုဟာ ရုတ်တရက် ငလျင်ဒဏ် လို တစ်ခုခု တိုက်ခတ်တာကြောင့် တစ်ချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပျက်စီးကုန်ပြီး လူတွေ သေကြပါတယ် (စလာကတည်းက တန်ပိုတင်ထားတာ) ဒီထဲကမှ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ကောင်မလေး နိုရာ ...
IMDB: 5.9/10 30973 votes